Shina: Voakombom-bava ve ireo mpitoraka blaogy Tibetana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2009 8:40 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Italiano, Español, বাংলা, македонски, English
Na dia efa mahazatra ireo vohikala amin'ny teny Tibetana mpampiantrano blaogy aza ny fiatona (indraindray noho ny “fanamboarana”) mandritra ny fotoana faritan'ireo manampahefana ho saropady (jereo ny ‘Fahanginana tanteraka eo anivon'ny blaogy Tibetana‘), tsy dia misy resaka politika loatra ny tamin'ity volana ity raha ny fahitako azy.
Tafiditra ao amin'ireo vohikala tsy azo idirana amin'izao fotoana izao ireo tena malaza, www.tibettl.com sy www.tibetabc.cn izay mampiantrano ny blaogin'ilay mpanoratra sy mpitoraka blaogy amin'ny teny Tibetana, Jamyang Kyi. Ny vohikala sisa mandeha izao , tsy hita hohazavaina, dia ny ChodMe (Jiron-dibera) http://www.cmbod.cn/index.html
Misy resaka mandeha amin'ny vohikalam-blaogy Tibetana fa hoe mifandray amin'ny fisamborana an'ilay mpanoratra Tibetana Tashi (solonanarana, Therang) izao fanakatonana izao. Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i Tashi, jereo ny lahatsoratro teo aloha ato amin'ny Global Voices.
Mahagaga fa tamin'ny volana nanombohan'ireo blaogy amin'ny teny Tibetana nikatona no nivoahan'ny People's Daily amin'ny teny Tibetana miaraka amina vohikala eto: http://tibet.people.com.cn/